RASMI: Kooxda Manchester United oo faah-faahisay heshiiska ay kula soo wareegtay Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Manchester) 31 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa faah faahin ka bixisay heshiiska ay kula soo wareegay Cristiano Ronaldo oo Jimcihii la soo dhaafay ay xaqiijiyeen inay heshiis kala gaareen Juve.
Bayaan ka soo baxay Kooxda Manchester United ayaa u dhignaa: “Manchester United waxa ay ku farraxsan tahay inay xaqiijiso saxiixa Cristiano Ronaldo oo aan kula soo wareegnay heshiis labo sanadood ah oo aan qiyaar u haysanno inaan ku kordhin karno sanad kale oo dheeri ah haddii loo baahdo.”
Ronaldo ayaa ku soo biiri doona Manchester United kaddib ciyaaraha caalamiga ah ee uu kala qeyb-galayo xulkiisa Portugal, Kooxda Juve ayaana dhankeeda saaka xaqiijisay inay CR7 ka iibisay Man Utd.
Cristiano oo shan jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon D’or ayaa ku guuleystay 30 koob intii uu ku jiray xirfaddiisa ciyaareed, waxaana koobabkaas ka mid ah shan UEFA Champions League, afar Koobka kooxaha Adduunka, todobo horyaal oo uu ku qaaday dalalka England, Spain iyo Italy iyo Koobka qarammada Yurub oo uu la qaaday qarankiisa Portugal.
Weeraryahan Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee horyaal ku qaada saddex waddan oo kala duwan, sidoo kale waxa uu ahaa goodhaliyaha ugu sarreeyey xilli ciyaareedkii hore horyaalka Serie A, isagoo ku guuleystay Kabta dahabka ah ee gooldhalinta sanadkan Koobka qarammada Yurub.
Cristiano Ronaldo markii ugu horreysay oo uu u ciyaaray Kooxda Manchester United waxa uu ud haliyey 118 gool, kaddib 292 kulan oo uu u saftay, halkaas ayuuna ka sii bilaabi doonaa marka uu dib ugu soo laabto Old Trafford kaddib ciyaaraha heerka Caalami.
RASMI: Kooxda Liverpool oo heshiiska u kordhisay Kabtankeeda Jordan Henderson... (Imise sano ayuu saxiixay?)